Ndozvakaitawo mabhande matsva eApple Watch Series 3 uye yapfuura | Ndinobva mac
Ndozvakaitawo mabhande matsva eApple Watch Series 3 uye apfuura
Kunyangwe iyo Apple Watch yakanga isiri iyo yekucherechedzwa kwezuro Keynote, Apple yakavandudza smartwatch yayo kune iyo vhezheni 3 Series. Iyo vhezheni nyowani ine W2 chip iyo inovandudza mashandiro ayo pamwe nekuuya kwesarudzo yeLTE, iyo inobvumidza mafoni kufona kubva kuApple Watch pasina kutakura iyo iPhone newe, hunhu hwazvino huchafanira kumirira kuSpain.
Nekusvika kweiyo Apple Watch nyowani, Apple zvakare inosanganisira itsva sarudzo uye mavara mune yayo katarogu yemabhande. Nenzira iyi, vese vashandisi venguva yemberi vanotenga iyo Series 3 uye avo vatove neyuniti yeyakatanga, Series 1 kana Series 2, tinogona kupa kutarisa kutsva kunewachi yedu yakakosha.
Imwe yemabheti matsva eapuro ndiyo Mutambo Loop, kuchinjika kwesimbi milanese asi yakagadzirwa neNylon uye nekuvharwa kwevelcro. Ichokwadi ndechekuti tambo yemitambo inokwezva kutarisisa kwakawanda uye kuti kana iwe uchizviona paApple Watch, zvinoita sekunge une wachi nyowani pachiuno chako. Tambo idzi dziri inofema uye isina huremu sezvo ivo vakagadzirwa nekaviri layer nylon. Mutengo wayo ndeye 59 euros pawebhusaiti yeApple. Nezve huwandu hwemavara, iwo anowanikwa mune anotevera mubatanidzwa:
Pakati pehusiku Bhuruu Sport Loop
Nhabvu Sport Loop
Amai vePearl Sport Loop
Rima Olive Sport Loop
Neon Yero Sport Loop
Turmeric Orange Mutambo Loop
Magetsi Pink Sport Loop
Jecha Pink Sport Loop
Kune rimwe divi, mavara matsva akauyawo kune mamwe matanhatu mabhanhire kuunganidzwa kwaive neApple mukatalog yayo. Mavara akawedzerwa uye panguva imwechete iwo asina kutengeswa iwo akange atovepo akabviswa. Iwo matsva ekuwedzera ndeaya:
Yakarukwa nylon: Pakati pehusiku Bhuruu, Muchena, Rima Muorivhi, Turmeric Orange, Checkered Berry, Yakapepetwa Nhema, Nhema, Yakatemerwa Muchena, uye Yakatsemurwa Mid Mid Blue.
Classic bhurugwa: nhema yepepuru, (PRODUCT) RED, cosmos bhuruu uye fuchsia pink.
Chiuno: cosmos bhuruu, marasha grey.
Sport tambo: Violet, rima maorivhi, akapfava machena, akasimuka akatsvuka, cobalt bhuruu uye grey.
Nike Sport Bhandi: platinum yakachena / nhema.
Hermès tambo: Bordeaux mune imwe chete Kuratidzwa uye Kaviri Kuratidzwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Ndozvakaitawo mabhande matsva eApple Watch Series 3 uye apfuura
Chiso ID inounza yekare Macinstosh icon
Ngwarira tekinoroji yeOLED yeiyo iPhone X skrini